Tabaha Taabagelinta Iibka | Martech Zone
Jimco, Febraayo 15, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Isbedelada suuqgeynta iyo suuqyada iibka ayaa sheegaya sida aan ganacsi u sameyno. Gaar ahaan, tani waxay loola jeedaa sida iibku ugu soo dhawaanayo rajada cusub iyo xiritaanka heshiiska. Kordhinta iibintu waa iskaashi suuq-geyn iyo iibin iyadoo soo saareysa dakhli. Hubinta in dadaalladaan la waafajinayo ay lagama maarmaan u tahay guusha labadaba suuq-geynta iyo iibinta.
Suuqge ahaan, dabcan waxaan u arkaa dadaalka suuqgeynta mid muhiim ah. Laakiin dhamaadka maalinta (iyadoo kuxiran xaalada), kooxda iibka wali waxay ku yeelan doontaa saameyn aad u daran "daran" rajada maxaa yeelay waxaa jira xiriir toos ah iyo mid shaqsiyeed (marka ay dhaafaan suuq-geynta ogolaanshaha ku saleysan ama toos ula xiriir). Haysashada qorshe istiraatiijiyadeed oo ku saabsan sida loola dhaqmayo rajada laga qabo aragtida iibka ayaa ka sii muhiimsan sidii hore. In kasta oo wareegga iibku uu noqon karo illaa iyo inta uu wareegayo suuq-geynta, dhibic kasta oo taabasho shaqsi ah ayaa go'aamin karta haddii aad ugu dhowdahay inaad la fariisato rajada ama inay dhammaysteen inay kula hadlaan weligood.
Haddii aad rabto inaad hubiso inaad hal talaabo u jirto kulankaas, markaa waa kuwan dhowr ah talooyinka karti-siinta iibka:
U hel dareen dareen nooca shakhsiyaddaada iyo qaabka aad wax u baraneyso. Dadku siyaabo kala duwan ayey u bartaan uguna dheefshiraan waxyaabaha ku jira. Gaar ahaan, waxaa jira 3 nooc oo waxbarasho ah: maqal maqal ah, muuqaal ah, iyo mid jilicsan.
Haddii himiladaadu runti ay u muuqato inay wax ku baranayso "maqalka" waxaad leedahay, hubi inaad kudariso podcasts, xiriiriyeyaasha bulshada, ama fiidiyowyada soojeedintaada Kuwani waa dhexdhexaadiyeyaasha mawduucyada ku habboon ee noocan ah rajada.
Haddii rajadaadu u muuqato inay wax badan kaga jawaabeyso garaafyo, jaantusyo, ama sawirro, markaa waxaad gacanta ku haysaa baraha muuqaalka. Kani waa nooca ugu caansan ee bartaha. Noocyo badan oo noocyo ah ayaa kahelaya bartahan - fiidiyowyada, joornaalada, buugaagta elektarooniga ah, joornaalada, sawirrada, iwm.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira kuwa wax ku barta jirka, oo wax ku barta wax qabad. Tani way xoogaa adagtahay in laga maareeyo aragtida suuq-geynta, laakiin waa la samayn karaa. Waxay rabaan “sidee” hagitaan ama nuxur u sheegaya iyaga “sidee” ay ku guuleysan karaan. Wargeysyada cad, ebook-yada, fiidiyowyada, iyo websaydhyada diirada saaraya sida wax loo gaadho ayaa ku wanaagsan rajada noocan ah. Muujinta khibrad iyo u siinta aqoontaas iyaga ayaa muhiim ah.
La soco dhammaan jidadka suurtogalka ah. Guud ahaan, ma jiro hal go'aan oo shirkad gaara. Go'aansiga maalgashiga adeeg ama wax soo saar waa go'aan kooxeed. In kasta oo ay jiraan shakhsiyaad iyagu leh wax ka badan kuwa kale, haddana waxaa muhiim ah in loo dacwoodo dhinacyo badan oo ka tirsan habka go'aan qaadashada.
Yuu yahay badeecadaada ama adeeggaagu inuu ka faa'iideysto? Tani waxay u badan tahay inay ku jirto suuqgeynta, iibinta, howlaha, iyo fulinta (khadka hoose). Ma aqoonsatay sida badeecadaada / adeeggaagu u caawinayo qof kasta oo ka mid ah shaqsiyaadkaas?
Waxaan aragnay kororka su'aalaha ku saabsan wicitaan-ficil. Halkii ay u sheegi lahaayeen rajada ah inay wax qabtaan, shirkaduhu waxay soo bandhigayaan su'aalo si ay ugu dhiirrigeliyaan guji-ka-eegista bogaggooda. Shakhsiyaadka ayaa go'aan ka gaadha iyada oo ku saleysan waxa iyaga u fiican - waxyaabaha ku xeeran "personas" ayaa gacan ka geysan doona ka dhaadhicinta go'aanka kooxda.
Our soo-jeedinta soo-jeedinta iibka, TinderBox, waxay siisaa fursad lagu abuuro soo-jeedin warbaahineed oo hodan ah oo rafcaan u noqon doonta nooc kasta oo bartayaal ah, iyo sidoo kale inay la socdaan cidda daawanaya soo-jeedintaada Qiyaasahaani waxay ugu dambeyntii gacan ka geysan doonaan xiritaanka heshiiska iyo horumarinta muuqaalka macaamiisha. Maareynta soo-jeedinta iibka ayaa fure u ah ku guuleysiga kaabayaasha iibka. Barashada sida loo abuuro soo jeedin wax ku ool ah oo iibka ah ayaa kordhin doonta beddelaadyada isla markaana gujineysa marinnada.
Maxay yihiin talooyinka kale ee kaabaya iibinta ee aad haysatid? Maxaad kale oo aad ku aragtaa warshadaha?
Tags: isgaarsiintaContent SuuqSaadaalinKordhinta Iibkatalooyinka karti-siinta iibka
On-Page SEO Habdhaqanka Ugu Fiican 2013: 7 Xeerarka Ciyaarta